अत्याधिक ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोगले छालामा निम्त्याउँछ यस्तो खतरनाक समस्या:: Naya Nepal
अत्याधिक ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोगले छालामा निम्त्याउँछ यस्तो खतरनाक समस्या
काठमाडौँ । विश्वभर कोरोना भाइरस महामारीका रुपमा फैलिरहेका बेला यसबाट बच्न अनेकौं उपायलाई अपनाइँने गरिएको छ ।कोरोनाको संक्रमण नहोस् भनेर स्यानिटाइजरको प्रयोग गरिन्छ । अधिकांशले प्रयोग गर्ने सामग्री हो सेनिटाइजर । तर यहि स्यानिटाइजरको अधिकतम प्रयोग पनि खतरा साबित हुनसक्छ ।चिकित्सकका अनुसार स्यानिटाइजरको अधिकतम प्रयोग स्वास्थ्यका लागी हानिकारक तथा खतरनाक हुनसक्छ ।
१.शरीरलाई फाइदा गर्ने व्याक्टेरिया पनि मर्छशरीरमा फाइदाजनक र हानिकारक दुबै प्रकारका ब्याक्टेरिया हुने गर्दछ । तर स्यानिटाइजरको अधिकतम प्रयोगले हानिकारक ब्याक्टेरियाका साथसाथै शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउने राम्रो ब्याक्टेरियालाई पनि मार्छ । तर शरीरमा राम्रो ब्याक्टेरीया हुनु अति आवश्यक हुन्छ ।
२ साबुन नहुँदाको विकल्प
एक रिपोर्टको दाबा अनुसार साबुनपानीले हात धुनु सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनबाट बच्ने यो नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । तसर्थ साबुन नहुँदाको विकल्पका रुपमा मात्र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
३. फोहोर सफा गर्दैन
स्यानिटाइजरले फोहोर हातलाई सफा गर्न सक्दैन । अर्थात हातमा भएको फोहोर हटाउन स्यानिटाइजर विकल्प होइन । तसर्थ फोहोर हात सफा गर्न साबुनपानीले हात धुनु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ।
४. बारम्बार हाच्छ्यु गर्दा प्रयोग गर्नुहुन्न
यदि तपाई आसपासको कुनै ब्यक्तिले बारम्बार हाच्छुयु गर्दछ वा तपाईं आफैलाई हाच्छ्यु आइरहेको छ भने हरेक पटक स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नु हानिकारक हुन्छ । यस्ता परिस्थितिमा इन्फेक्सन हुने खतरा हुन्छ ।
५. छालामा नकारात्मक असर
स्यानिटाइजरको अधिकतम प्रयोगले हातको छालमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । छाला सुख्खा हुने, चिलाउने लगायतका समस्या आइलाग्न सक्छ ।
ग्याष्ट्रिक देखि अल्सर भएका व्यक्तिले कहिल्यै नपिउनुहोस् यस्तो समयमा दुध,हुन्छ स्वास्थ्यको लागी घातक
कुनैपनि स्तनधारी प्राणीका लागि दुध अतिनै आवश्यक पदार्थ हो । अझ मानव जीवनका लागि त झनै महत्वपूर्ण पदार्थ मध्ये एक मानिन छ । कुनै पनि शिशुका लागि जन्मेको ६ महिना सम्म उसको सम्पूर्ण खानेकुरा भनेकै दुध मात्र हो । अर्थात दुध बाहेक अरु चिज दिन सकिदैन वा हुदैन पनि । बच्चाको उमेर बढदै जाँदा विस्तारै आमाको दुध आउने र बच्चाले खानेक्रम घटदै जान्छ । त्यसको पूर्ति गाई , भैँसी, भेडा, बाख्रा लगायतका जनावरका दुधबाट पूर्ति गर्ने गरिन्छ । दुध ‘माइक्रो न्युट्रेन्ट’ हो , जसले शरीरको सम्पूर्ण बृद्धिविकासका लागि सहयोग पुर्‍याउछ ।दुधबाटै शरीरका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटिन, कार्वोहाइट्रेड, फ्याट र मिनरल्स लगायतका तत्वहरु पाइन्छ । शरीरका लागि आवश्यक पदार्थ दुधबाटै पाइने हुनाले नियमित रुपमा दुध पिउने व्यक्ति शारीरिकरुपमा तन्दुरुस्थ र निरोगी हुन्छ ।दुधमा पानीको मात्रा निकै बढी हुन्छ । त्यसैले साना बच्चाहरुलाई दुध खुवाएपछि छुट्टै पानी खुवाईदैन । किनकी दुधले पानीको काम पनि गर्छ । १०० ग्राम दुधमा ८७. ७ ग्राम पानी हुन्छ । ३.३ ग्राम प्रोटिन, ३.६ ग्राम लिपिड, ४.६ ग्राम कार्वोहाइट्रेड ०.२ ग्राम अर्गानिक एसिड र ०.७ ग्राम मिनरल्स हुन्छ । दुधमा पाइने प्रोटिनले शरीरको वृत्तिविकासको लागि काम गर्छ । बोसो र कार्वोहाइट्रेडले शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्छ । तुलनात्मक रुपमा गाईको भन्दा भैँसीको दुधमा कार्वोहाइट्रेड र बोसोको मात्रा बढी हुन्छ । तर कोलिस्ट्रोल र मिनरल्सको मात्रा गाईको दुधमा बढी पाइन्छ ।
के काम गर्छ :
सामान्यतया दुध खान नहुने भन्ने त्यस्तो रोग नै छैन । जुनसुकै रोगीले पनि ताजा दुध खानु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक नै हुन्छ । तर कहिले काही दुध नखानु पनि राम्रो मानिन्छ । त्यो अवस्था कतिवेला आउछ भने जव हाम्रो शरीरमा ल्याक्टोजको मात्रा कमी भएर पखला लाग्छ । ल्याक्टोज भन्ने एक किसिमको सुगर जस्तै तत्व हुन्छ । त्यसले पाचनको काम गर्छ । जो मान्छेमा त्यो तत्वको कमी हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले दुधको सेवन गर्दा झनै पखला लाग्ने बढने सम्भावना हुन्छ । यसलाई चिकित्सक भाषामा ल्याक्टोज इन्टोरोलेन्स भन्ने गरेको छ । यो विशेष गरी बालक र बृद्धहरुमा देखा पर्छ । त्यसैले ल्याक्टोज इन्टोलोरेन्स हुदा खेरी भरीसक दुध नपिउनु राम्रो भन्ने गरिन्छ । अन्यथा जुनसुकै रोगका विरामीले दुध पिउनु सकिन्छ ।चिकित्सा विज्ञानले बच्चालाई जन्मेको कम्तीमा छ महिना सम्म आमाको दुधमात्रै खुवाउनु पर्छ भनेको छ । त्यसपछि भने आवश्यकता अनुसार गाई भैसीको दुधहरु खुवाउन सकिन्छ । त्यो क्रमलाई जिवनभर निरन्तरता दिन सकिन्छ ।पछिल्ला समयमा बजारमा पाइने प्याकेटवाला दुधमा पनि गाईभैसीकै दुधमा पाइने तत्व हुनुपर्ने हुन्छ तर कतिपय कम्पनीका दुधमा त्यस्तो तत्व नभएको भन्ने समेत सुनिएको छ । त्यसैले प्याकेट दुधको खरीदमा त्यसको प्याकेटमा लेखिएको तत्वहरुको समेत अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ ।दुधबाटै बन्ने दहीले समेत मानव स्वास्थ्यका लागि फाइदा जनक छ । दुधमा पाइने तत्वसंगै दहीमा ल्याक्टो बेक्टेरियास भन्ने तत्व हुन्छ । त्यसले इन्जाइमको काम गर्छ । त्यस्तै दुधबाट बन्ने पनिर तथा चीजले प्रोटिनको काम गर्छ । त्यसैले दुधमा हुने विभिनन पदार्थलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न परिकारमा परिवर्तन गरी फाईदा लिन सकिन्छ ।
दूध पिउने ७ नियम
बिहान उठेर दूध पिउनु हुँदैन । यसले पेटमा एसिडको स्तर सन्तुलन रहँदैन । एसिडिटी या कफको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
दूध सधैँ रातीमा पिउनुपर्दछ । यसमा पाईने अमीनो एसिडले दिमाग शान्त रहन्छ । रातीमा निन्द्रा राम्रो लाग्छ ।
खाना खाने बित्तिकै दूध पिउनुहुँदैन । यसले अपचको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । खाना खाएको दुई घण्टा पछि दूध पिउनु फाइदाजनक हुन्छ ।
सधैँ मनतातो दूध पिउनुपर्दछ । एसिडिटी र अल्सरको समस्या छ भने चिसो दूध पिउन सक्नुहुन्छ ।
दूधमा चीनी मिलाएर पिउनु हुँदैन । यसको साटो किशमिश, खजूर, वा मिश्री मिलाएर पिउनु फाइदाजनक हुन्छ ।
कतिपय मानिसलाई दूध पिउँदा पाचन प्रक्रिया खराब हुन्छ । यस्ता मानिसले दूधमा अदुवा या पिपली मिलाएर पिउनुहोस् ।
दूधमा अदुवा, ल्वांग, इलायची, केसर या दालचीनी मिलाएर पिउँदा पेटको समस्या हट्छ । दूध सजिलै डाइजेस्ट हुन्छ ।